2020 mashruuc oo dib u soo celin ah ayaa laga hirgelin doonaa gobolka Stavropol sanadka 20 - Nidaamka Baradhada
Sida laga soo xigtay Waaxda Siyaasadda Macluumaadka ee Gobolka Stavropol, wadarta guud ee mashaariicda la hirgeliyay sannadkan waxay qiyaastii tahay 2 bilyan oo rubi.
In ka badan 1 bilyan oo rubi ayaa loo qoondeeyay taageerada gobolka ee dib u soo celinta dhulka ee miisaaniyadda la isku daray ee gobolka. Waqtigaan la joogo, 20 mashruuc oo cusub ayaa la hirgelinayaa oo qiimihiisu yahay 1,8 bilyan oo rubi, taasna waxaa mahad leh dhulka dib u soo celinta dhulka ee Stavropol Territory wuxuu kori doonaa 9 hektar oo kale oo ah waraab casri ah dhamaadka sanadka, ”ayuu yiri Wasiirka Beeraha ee gobolka Vladimir Sitnikov.
Sidoo kale, 20 codsi ayaa horay loo gudbiyay sanadka soo socda. Mashaariicdan waxaa loogu talagalay in lagu abuuro nidaam waraab oo ku fadhiya dhul cabirkiisu dhan yahay 12,3 kun oo hektar. Qiimaha shaqadu wuxuu noqonayaa 2,7 bilyan oo rub. Mustaqbalka, 23 mashruuc oo suurtagal ah oo dheeri ah ayaa lagu horumarinayaa qadarka 5 bilyan oo rubi.
Source: Run stavropol
15 kun tan oo baradho ah oo laga soo saaray Udmurtia
Goyn wanaagsan oo baradho ayaa laga goostaa gobolka Stavropol
Warshad soosaarista khudaarta iyo miraha la qalajiyey ayaa laga furi doonaa Tervropol Territory